Mukati mekugadzira dzimba dzimba - Mukati wekambani yekambani - Muumbi wekugadzira Galati pret - Nobili Interior Design, studio, mugadziri, mugadziri, makambani
rokusika chikwata chedu kubva Galati Design Noble akatanga kuita yekuronga nzvimbo uye mukati magadzirirwo pfungwa 3d yedzimba, maresitorendi, nembariro, hotels, zvitoro, mahofisi kubva 2008. Kwatiri, yakanga isiri basa chete, asi chikamu chinokosha chehupenyu. Nhoroondo yedu uye yakakwirira yebasa yakabatsira kuti tive umwe wezvinonyanya kuzivikanwa uye zvakakosha mukati mekugadzira firms. Kusvika ikozvino, takabudirira kuumba nhamba yakawanda yekunze kwekunze kwezvivako zvekugara uye zvekutengesa. Takaitawo mapurisa e3D emangwana emangwana, dzimba, nzvimbo dzebhizimisi, spa spa, maresitorendi, mabhazi, pizzerias, beauty centers nezvimwe zvakawanda. Mukuwedzera, tinogona kuronga mahofisi ehofisi umo vashandi vanonzwa vakasununguka.
Izvo hazvina zvinyorwa mune izvi. Kana pane zvikamu zviduku pane peji ino, vangave vane zvinyorwa.